President Thein Sein Discusses the Situation in Rakhine State | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ- ဘွဲ့ခံ ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) ဟာ သမ္မတ ထောက်ခံပွဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးကို သုံးပြီး မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ ဆော်ပွဲကို ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ဦးဆောင်ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။
[Double-talk isaform of speech in which inappropriate, invented or nonsense words are used to give the appearance of erudition and so confuse or amuse the audience. Durwood Fincher has madeacareer of perfecting the art of double-talk, giving interviews on national TV programs and writingabiography of his experiences, calling himself “Mr. Doubletalk”.]